Ọkpụkpụ egbugbere ọnụ
Ndị na-ejide agịga
Ngwaọrụ ịwa ahụ
Production & Ogo njikwa
Ihe Ọmụma Ngwaahịa
Ihe dị iche na etiti anụ ahụ na Suturing Scissors
Post oge: 03-23-2021
Ihe di iche di na etiti anụ na Suturing Scissors Ihe dị iche na etiti anụ ahụ na skis dị iche iche dịka:GỤKWUO »
Gịnị Banyere Ngwá Ọrụ Microsurgery?
Post oge: 03-19-2021
Gịnị Banyere Ngwá Ọrụ Microsurgery? Ngwa oru Microsurgical na-arutu aka na ngwa oru ndi puru iche ndi dibia kwesiri ka ha mee nkesa, nkewa, na nbughari na mmezi ihe ndi ozo n’okpuru microscope. Ngwa microsurgery a na-ejikarị: 1. Microsurgery forceps bụ ihe kachasị c ...GỤKWUO »
EBERE AKW OFKWỌ OPHTHALMIC
Post oge: 03-16-2021
EBERE AKW OFKWỌ OPHTHALMIC. Ngwaọrụ ophthalmic niile chọrọ ijikwa nlezianya rụọ ọrụ. Isi ihe dị mkpa dị mkpa; Ekwesighi imetu ihe niile aka, ihe ndi ogwu na ihe di nma kwesiri ka ha chebe ha Ndi nchebe gha aghachi ahihia ma obu ...GỤKWUO »
Iri isi mgbanwe ụlọ ọrụ ahụike China na 2021!
Post oge: 03-13-2021
Iri isi mgbanwe ụlọ ọrụ ahụike China na 2021! 1. Ahụike mkpuchi ahụike abanye na oge 2.0 Usoro 1.0 nke mkpuchi ahụike bụ ọkachasị mkpuchi mkpuchi ahụike zuru ụwa ọnụ na China na afọ 5,000 ...GỤKWUO »
Gịnị bụ ịwa ahụ rọba?
Post oge: 03-08-2021
Banyere Surwa Ahụ Plastic Plastic ịwa ahụ bụ ọpụrụiche ịwa ahụ nke na-edozi, rụzigharị, ma gbanwee ahụ mmadụ. E kewara ya ụzọ abụọ: ịwa ahụ nwughari na ịwa ahụ ịchọ mma. Surgerywa ahụ na-emezigharị gụnyere ịwa ahụ craniofacial, ịwa ahụ aka, microsurgery, na ọkụ na sca ...GỤKWUO »
Banyere Ozi Ndebanye aha Ngwaọrụ na China Site na CMDE
Post oge: 03-05-2021
Banyere Ozi Ndebanye aha Ngwaọrụ Ahụike na China Site na CMDE Ozi ngwaahịa nke anụ ụlọ klaasị III, mbubata nke II na ngwaọrụ ahụike nke klas III kwadoro maka ndebanye aha na 2020 Na 2020, Steeti Nri na Ọgwụ Ọchịchị kwadoro ngụkọta nke ngwaahịa ngwaọrụ ahụike 1,572 (gụnyere .. .GỤKWUO »
Isi nhazi ọkwa nke ịwa ahụ
Post oge: 03-02-2021
Isi nhazi ọkwa nke ịwa ahụ mkpa Ọtụtụ mgbe, ndị nke ogwugwo mkpa nwere ike wezuga n'ime ọtụtụ edemede dị ka usoro nhazi ọkwa dị iche iche. Dị ka ojiji maka akụkụ ahụ, ọ gụnyere microsurgical sissors, ophthalmic scissors, tissue scisis, scisis scisis, wdg. Na ...GỤKWUO »
Kedu ihe nyocha ndị a na-emekarị banyere anya gụnyere?
Post oge: 01-23-2021
Kedu ihe nyocha ndị a na-emekarị banyere anya gụnyere? Nyocha nyocha nke ophthalmology gụnyere: nyocha ophthalmoscope nke ego, nyocha nrụrụ intraocular nke nrụgide intraocular, ọnọdụ dị omimi, ma enwere ọbara ọgbụgba na retina, corneal confocal microscope examinati ...GỤKWUO »
Kedu otu esi ahọrọ ngwa ịwa ahụ kacha mma maka ịwa ahụ?
Post oge: 01-11-2021
Kedu otu esi ahọrọ ngwa ịwa ahụ kacha mma maka ịwa ahụ? Bọchị: 2021-01-11 Mgbe ụlọ ọgwụ na-ahọpụta akụrụngwa, olee ihe ndị dị mkpa ha kwesịrị ịtụle? Otu esi choputa ndi kwesiri ekwesi kwesiri ka ...GỤKWUO »
Hongyu Medical gara na ndị dọkịta na-awa ahụ na Orthopedic emere na Hangzhou City
Post oge: 10-26-2020
Hongyu Medical gara na ndị dọkịta na-awa ahụ na orthopedic emere na Hangzhou City 2020-10-26 E mere ogbako ịwa ahụ plastik dị mkpa na ama ama na Xihu, Hangzhou, China, site na 20th ~ 24th, 2020. HongMedical President Mr.Chen na Manager gara nzukọ dị ka ndị nnọchianya nke anyị manufactu ...GỤKWUO »
Obi ụtọ na Mid Autumn Festival na National Day
Post oge: 09-27-2020
Obi Midtọ Mid Autumn Festival na National Day Hongyu Medical chọrọ gị niile chioma, na Mid mgbụsị akwụkwọ Festival na National Day bụ obi ụtọ! Oge ezumike nke mgbụsị akwụkwọ anyị na ụbọchị nke mba na-eru nso ma anyị ga-enwe ezumike maka ememe. Biko jiri obiọma dụọ gị ọdụ ka emebere ezumike anyị ka ...GỤKWUO »
Hongyu Medical Attga Mkpa Plastic Medical Ngosi
Post oge: 06-23-2020
News About Medical Exihibiton :bọchị: 2020-06-23 Hongyu Medical nọ na-aga ihe dị mkpa plastic ngosi, nke e mere na JiNan City, Shandong Province. O mere nnukwu succss. -Hongyu AhụikeGỤKWUO »
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị update, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa.